Madaxweyne Farmaajo oo iska fogeeyay muddo kororsi kana hadlay fashilka shirkii Garoowe – Somali Top News
Madaxweyne Farmaajo oo iska fogeeyay muddo kororsi kana hadlay fashilka shirkii Garoowe
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeedinayey Munaasabadda sanadkii guuradii 76-aad ee ururkii Dhallinyarada SYL oo xalay lagu qabtay Magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay Shirkii Garoowe iyo sababihii keenay in la isku fahmi waayo.
Madaxweynaha oo ka hadlayey Shirka Garoowe ayaa sheegay in qaar ka tirsan Madaxda Maamul Goboleedyda, gaar ahaan Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Gelle Xaaf uu doonayey inuu waqti kororsi sameysto taasina ay ka hor timaaday Dowladda Soomaaliya.
Maaxweyne Farmaajo ayaa sheegay inaysan jirin cid Hal maalin ku darsan karto waqtiga sharciga ee uu xilkiisa ku eg yahay haddii ay ahaan laheyd Maamul Goboleedyada iyo Dowladda Dhexe.
Madaxwyenaha ayaa tilmaamay in haddii la ogolaado in Madaxweyne Dowladda Dhexe iyo mid Maamul Goboleedyada loo ogolaado inuu waqti ku darsado ay taas noqon doonto wado furmato oo keeni karto in dalka uu dhibaato galo.
Madaxweynaha ayaa dhawr jeer kusoo celceliyey inaan cidna loo ogolaan doonin inay waqti ku darsato xataa isaga oo lagu eedeenayey maalmihii dambe inuu doonayo waqti kororsi.
Dhanka kaleMadaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in markii horaba ay shirka Garoowe ujeedka loo tagay ay aheyd in laga wada hadlo arrimaha amniga oo uu ku sheegay inay tahay midda ugu muhiimsan oo hor taalo Dowladda iyo Maamul Goboleedyada balse wuxuu sheegay in markii shirka la tagay ay Madaxda Maamul Goboleedyada la imaadeen qodobo kale.
Wuxuu sheegay in qodobadii ay Maamul Goboleedyada soo jeedeyn kamid aheyd in la dhiso madal ay ku mideysan yihiin Dowladda iyo Maamul Goboleedyada .
Madaxweynaha ayaa cod dheer ku sheegay inay Dowladda Dhexe ka diiday Maamul Goboleedyada in la dhiso madal, wuxuuna taas ku micneeyey inay soo arkeen dhibaatada iyo faa’idada ay leedahay in la sameeyo Madal
Madaxweynaha ayaa xusay in Sharciga uu qabo in Maamul Goboleedyada iyo Dowladda Dhexe ay kulmaan sanadkiiba mar si la isaga wareysto Xaaladaha dalku marayo balse aysan marnaba aqbali doonin in madal la sameeyo.
Maamul Goboleedyada ayaa shirkii Garoowe kusoo bandhigay in la sameeyo Madal ay ku mideysan yihiin Dowladda iyo Maamul Goboleedyada balse wuxuu Farmaajo banaanka usoo saaray inay arrintaas ka hor timid Dowladda Dhexe.
← Farmaajo “Xaaf wuxuu diiday daawadii loo qoray, wuxuuna rabay muddo kororsi, waana ka diidnay”
Al shabaab oo sheegtay iney Qarax ku dileen ciidan katirsan kuwa AMISOM →
Sidee isaga ilaalin kartaa Tuugo hubeyan oo ku soo badatay magaalada Muqdisho?
Soomaaliya oo kamid noqotay dalalka Difaacaya dhibaatada Shiinaha ku hayo Muslimiinta Uighurs